ငါတို့သည် အိုဂျီများသာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ငါတို့သည် အိုဂျီများသာ
ဦးကြောင်ကြီးကား နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်၊ သားဖွားမီးယပ် အိုဂျီ ဆရာဝံ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အအို ဦးစားမပေး အပျိုသာ ဦးစားပေး ရွေးကုသည်။ အအိုဆိုတာ ပြုစုမည့် လင်ယောက်ျားရှိတယ်၊ အပျိုကျတော့ ဘယ်သူ့ သွားအားကိုးမလဲ။ ငယ်စဉ်ထဲက ဝါသနာ ပါလွန်းရွေ့ တနေ့ ငါကြီးလာ ဆရာဝံ လုပ်မယ်၊ သေသေချာချာ စောင်မကြည့်ရှုမယ် စိတ်ဝယ်မှန်းကာ ပညာထူးချွန်အောင် ကြိုးစားသည်၊ ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့်ရကာ အနှီဘာသာရပ်ဝယ် ထူးချွန်သောကြောင့် ဂုဏ်ထူး ပထမအဆင့်နှင့် အောင်သည်။ ထို့နောက် မာစတာဘွဲ့ရပြီး အိုဂျီ အထူးကု ကြောင်ကြီးဟု ပျိုပျိုတို့အလယ် ထင်ရှားလေသည်။ သိပ်သဘောကောင်း စေတဏှာပါတာ၊ ကြည့်ပေးတာများ အသေးစိတ်၊ သိပ်ကြင်နှာတတ်တဲ့ ဆရာဝံ….။ သို့သော် လောကနိယာမ အများကြိုက်လျင် အနည်းမုန်းသည်မို့ သူ့အား မျက်စေ့ စပါးမွှေးစူးသူများလည်း ရှိသည်။ အသိသာဆုံးက အတန်းဖေါ်ဟောင်း ဒေါက်တာကြေးအိုး။ အမြဲတမ်း ကြောင်ကြီးအား အပုပ်ချတိုက်ခိုက်သည်။။ ။။။။။
အမှန်တော့ ကျောင်းတော်က ရန်စပါ။ သူဖြစ်ချင်သည်ကလည်း အိုဂျီဆရာဝံ… ဒါကို ကြောင်ကြီး ဖြတ်အုပ်သွားသည်၊ ဖိုင်နယ် နောက်ဆုံး စာမေးပွဲ အိုဂျီဘာသာရပ် ဖြေကာနီး ကကြောင်မှ ကကြေးအိုးအား အကျက်နှင့်တင် မလုံလောက် အမြင်ပါလိုသည် စွဲဆောင်ကာ ဘီလူးကား ပြလေသည်။ ကြည့်နေစဉ်တွင် ဖီးကြမ်း၊ ကြက်ဥ၊ နွားနို့၊ ထောပတ်၊ လစ်ပို တို့ကို အလျံအပယ် ဧည့်ခံသည်။ တခွေနှင့် အားမရ နောက်တခွေ ထိုးပြသည်.. ပထမ ဒသဂီရိကား၊ ဒုတိယ အဠာဝကကား၊ တတိယ တာနောယက္ခကား…. ထို့နောက် ထို့နောက် ဘီလူးကားပေါင်းများစွာ ပြရာ ဒေါက်တာလောင်းကြေးအိုး မစားရဝခမန်း ကြည့်လေသည်။ ထို့နောက် လက်တွေ့ ကွင်းဆင်းရမည်ဆိုကာ ဂေါင်းအောင်ပုထံ မိတ်ဆက်စာရေး လွှတ်လိုက်သည်။ ဆရာဝံလောင်းမို့ ကပုကလည်း ဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုသည့်အပြင် တဝက်ဈေးနှင့် buy one get ပရိုမိုးရှင်းပါပေးသည်။။ ။။။။။။
တနေ့ထဲမဟုတ်.. နေ့စဉ်ရက်ဆက် ပေးသဖြင့် စမူဆာစား ရေသောက် ပိုက်ဆံစုကာ နေ့တိုင်းတီးသည်။ ပွဲဆက်များသွားသော ဒေါက်တာကြေးအိုးခမျာ စာမေးပွဲဖြေသည့်နေ့တွင် ကျောင်းလှေခါးပေါ်သို့ မျက်တွင်းဟောက်ပက် လေးဖက်ထောက်တက်ရသည့်ပြင် အသက်ရှုမဝ… ကံသီရွေ့သာ ကပ်အောင်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်ကား အိုဂျီဆရာဝံ ဖြစ်ခွင့် ဆုံးရှုံးရလေသည်။ အီအကြောင်းသာ သူ့စော် ငအီးဒုံးသိလျင် ကလော်အတုပ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စမူဆာတွေ့တိုင်း နဖူး အနာရွတ် စမ်းမိလျင် အခဲမကြေသော ကေးဝဋ်ပုဏားကဲ့သို ကြောင်အပေါ် စိတ်အနာကြီး နာလေသည်။။ ။။။။။
ကကြောင်ကတော့ ဒါတွေ အမှတ်မထား.. လမ်းတွေ့တိုင်း သင်ပုန်းချေရန်၊ ခွင့်လွှတ်သည်းခံစိတ်မွေးရန် ရွှေပြည်ရေးတရား ဟောသည်… ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆောင်ရွက်သည်။ သြော်… ပြုသူနှင့် ခံရသူ တူနိုင်မည်လော။ ဒေါက်တာကြေးအိုးကား ထိုသို့ အပြောခံရလေ ရင်ထဲ ဒေါသ အလိပ်လိုက် တက်လာလေ ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း သူ့စော် ငအီးဒုံးလက်ထဲ ဒေါက်တာကြောင်ကြီး လိပ်စာကတ်တွေ့သည်။ မျက်လုံးများ ပြာဝေသွားကာ အသားတဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်။ စကားပင် မပြောနိုင်… ခက်တာ သူလည်း အဲဒီရောဂါ မကုတတ်။။ ။။။။။
အီတွင် ကင်းကောင်၊ လုမ နှင့် ခြစ်သျှားတို့အား… ညည်းပေါချောင်ကောင်း ဈေးနဲ့ အိမ်မဝယ်ချင်လား၊ ငါ ဗိုက်နာနေတဲ့ အိမ်ရောင်းမည့်သူ တွေ့ထားတယ်.. စသဖြင့် လီဆယ်ပြောကာ ကြောင်ကြီး ဆေးခန်းလိပ်စာသို့ ညွှန်သည်။ အိမ်ရှင်က ကြီးကြီးငယ်ငယ် သူ့ကို သားလို့ ခေါ်မှ ကြိုက်တယ်။ သူနဲ့တွေ့ရင် ကျမ သား အိမ်ကြည့်ချင်လို့ပါ ရိုရိုသေသေပြော..။ ပြီးတော့ သူက ယောဂ လေ့ကျင့်ခန်း ခရေဇီ.. ဆေးခန်းလာသမျလူ ယောဂ သင်ပေးနေတာ။ သူ လုပ်ခိုင်းသလို လုပ်ရင်း ဈေးစကားပြော.. ကုန်းကုန်းကွကွ လုပ်ခိုင်းလဲ စိတ်ထဲ ဘာမှ မဖြစ်နဲ့… ကြားလား …. ။ ထိုသို့ ချွန်တွန်းကာ လူခွဲရွေ့ တယောက်ချင်း လွှတ်လိုက်ရာ…. ။။ ။။။။။
၂ဗူးကြောင်ကြီး အလိုမရှိ၊ နှာကွန်တိန်နာကြောင် အလိုမရှိ… အိုဂျီအထူးကု ဒေါက်တာကြောင်ကြီး ဆေးခန်းရှေ့ဝယ် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ခါနေသည်။ သူတို့အား ကိုယ်ထိလက်ရောက် မဖွယ်မရာပြုကြောင်း လက်ကိုင်ဖုံးနှင့် ဖဘတွင် တိုက်ရိုက်လွှင့်သည်။ စေတဏှာ ရှေ့ထားမိသဖြင့် မြွေခြောက် ကိုက်လေပြီ။ ကကြောင်ကတော့ အပြုံးမပျက်… သူ အမှားမလုပ်.. ဝါသနှာပါရာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ လုပ်သည်… မှန်သောစကားတည်း။ ။။။။။
ကင်း လု သျှား တို့ဖက်တွင် မည်သူမှမရှိ… ကကြောင်ဖက်တွင် အင်နှင့်အားနှင့် လူအပြည့်ရှိသည်။ အိုဂျီတယောက်၏ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကို အားကျသူ များစွာပေါ်ထွက်လာသည်။ ရှင်ဂျီးနိဂိမိ၊ အလိင်စက်၊ မာဃ၊ အာဂ စသည့်တို့ ဦးဆောင်ရွေ့ “ငါတို့သည် အိုဂျီလောင်းများသာ” လက်ညှိုးထောင်ထားသည့် ပရိုဖိုင်းပုံ ဖဘတွင် ပြောင်းကျသည်။ လူညီလျင် အီ သည် ကျွဲ ဖြစ်မို့ ကင်း လု သျှားတို့ တောင်းပန်ရလေပြီ။ အဟင့် ကိုကိုကြောင်ကြီးရှင့် သာမီးတို့ မှားပါပြီ။ နောင် မြှောက်ပေးတိုင်း မမိုက်တော့ပါဘူး.. နောက်တခါ လာပြရင် မကြည့်ဘဲ မနေလိုက်ပါနက်။ အိုဂျီလောင်းများကား မကျေနပ်၊ တရားစွဲမည် ထောင်ချမည် ကြိမ်းဝါးသည်။ အနည်းဆုံးတော့ ကကြောင်အိမ်တွင်တွင် ထောင်ချရန် ဆော်သြသည်။ ဒေါက်တာ ကြောင်ကြီးကား အင်းမလုပ် အဲမလုပ် ဘေးတွင် မြင်နေရသော အိုးများကိုသာ (ရေအိုး၊ စဉ့်အိုး) အံကြိတ်ငေးလျက်….. သူ့ဝါသနှာ မြတ်နိုးရာ အိုဂျီဆေးပညာရပ်တွင်သာ ခေါင်းဝင်ကိုယ်ဆံ့ နှစ်မြှုပ်ထားမည်မှာ သေချာနေပေတော့သည်။….။။ ။။။။။
သာမီးလေးများ အထူးကု အိုဂျီဆရာဝံကြောင်ကြီး
ကင်း လု သျှားတို့ကပဲ တောင်းပန်ရမလား…၊ အူးကြောင်ပဲ လူမသိသူမသိ တုတ်ထိုးဖြစ်မလားပဲ..
အူးကြောင်စင်စစ်ကနေ နတ်သျှင်နောင် ဖြစ်သွားမယ်…
ညှီလို့ စပါးလင်၊ ဂျင်း နိုင်နိုင်ထည့်ရုံအပြင် အပန်းမကြီးဘူး.. ဟွင်းးဟွင်းးးး
ကျန် နူးဘာတွေက အားတွေကျ … သူကတော့ ဆုတောင်းမှားတယ်လို့ဆိုတယ်…
အဆိုးဆုံးကတော့ အနှီငတိ နွဲ့ပြီး ပုန်းသွားတယ်…
လွယ်သလား ခက်သလား ကကြောင်ဏှာ…
နှိုက်ရဲတာ အိုဂျီ … ရှုရဲတာ အိုဂျီ … ဝေါ့
စိတ်ကူးယဉ်တာလည်း တော်ရုံပဲ ယဉ်ပါ ကကြောင်ရာ….
အိုမှ ဂျီကျတဲ့ ကြောင်အိုဂျီကျကြီးပါ
ခလေးအဖေ ပေါ်တော်မူလာသေးသဂိုး… အဟွတ်
ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ ဆရာဝန်ကို ပြေးမြင်အောင် ရေးနိုင်ပါ့..
စာဖတ်ပြီးလည်း ရယ်ရ.. ဟိုဘက်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီးလည်း ရယ်ရနဲ့.
OG များ သိပ်လုပ်ချင်ရတယ်ရှိသေး အနံ့ဆိုးတာ မသိဘူး ။
OG အသာထား Pap Smear ကိုဘဲ တနေ့ ၄ ယောက်လောက် လုပ်ကြည့် ၊
ဆရာဝန် ဖြစ်ချင်စိတ်ပါ ကုန်သွားမယ် ။